စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ ??? – Gentleman Magazine
သင့်ဖက်က စိတ်မဆိုးပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်က အကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုး ဒေါသဖြစ်နေတာကို ကြုံဖူးပါသလား။ ဒီလို စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူဟာ သင့်ကောင်မလေး၊ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဒါမှမဟုတ် အခြားသူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက သင့်ကို နေမထိထိုင်မသာဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါဆိုရင် သင့်ကို စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူကို ဒေါသပြေပျောက်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ။။
ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် အဆင့်လေးခုရှိပါတယ်။ စိတ်ဆိုးရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ အခြေအနေတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် ဒီအဆင့်တွေကိုတော့ အခြေအနေအများစုမှာ အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအချက်က ခွန်းတုံ့ပြန် မပြောဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်လူက စိတ်ဆိုးပြီး ဘာပဲပြောပြော၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် ပြန်မတိုက်ခိုက်မိပါစေနဲ့။ ဒီလို ပြန်ပြောမယ်၊ ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် တဖက်လူကို ပိုပြီးစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ ဒေါသနဲ့ မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ သင့်အနေနဲ့ ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ ခံစားရရင်တောင်မှ ဒီအချိန်မှာ မာနကို ခဏတာဘေးချိတ်ထားလိုက်ပါ။
၂။ ဂရုစိုက်မှုကို ပြပါ။
စိတ်ဆိုးနေသူကို ပြန်ပြီးဒေါသဖြစ်နေမယ့်အစား သူတို့ကို ဂရုစိုက်တဲ့အကြောင်း ပေါ်လွင်အောင် ပြသရမှာပါ။ များသောအားဖြင့် စိတ်ဆိုးကြသူတွေဟာ နားလည်မှုလွဲမှားနေတာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ပြောတာကို သေချာနားထောင်ကြည့်တာက သူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်ပြောသင့်တဲ့စကားတွေကတော့ —–
ဘာများမှားယွင်းသွားလဲ ပြောပြနိုင်မလားခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။
အခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျွန်တော် ဘာများလုပ်ပေးရမလဲခင်ဗျ။
ဒီလို ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆင်ပြေရဲ့လားခင်ဗျ။
စတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဆိုးနေသူဆီက စကားတွေကြားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူတို့ပြဿာကို နားထောင်ပြီး ရှင်းပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဆိုးနေသူက သင့်အပေါ်မှာ ဒေါသတွေပုံချနေပြီဆိုရင် အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဖို့ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင့်အနေနဲ့ သူတို့ဒေါသဖြစ်တာကို ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာ လုပ်ပြ၊ ပြောပြလိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကြောင့် ကြောက်သွားတာ၊ စိတ်ရှုပ်သွားတာ၊ စိုးရိမ်သွားတာ စသဖြင့် ပြောပြလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ သင်ပြောဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာ၊ သင်လုပ်ဆောင်ပေးတာမှာ သူတို့ကို ထိခိုက်နစ်နာစေတာ မရှိဘူးဆိုတာ သိသွားအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
၄။ စိတ်တင်းမာမှုကို လျှော့ချပေးပါ။
ဒီအချက်ကတော့ နည်းနည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် တစ်ချို့ဇီဇာကြောင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်တွေက စိတ်တင်းမာမှုလျော့အောင် လုပ်တာကို တစ်မျိုးတစ်မည်ထင်တတ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်ဆောင်သင့်လဲဆိုတာကို သုံးသပ်ပြီး ဟာလလေးတွေပြောတာ၊ ပြုံးပြတာ ဒါမှမဟုတ် အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စက ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဆိုတာကို သိသာအောင် ရှင်းလင်းပြတာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ နည်းလမ်းတွေရှိရှိ၊ သင့်အနေနဲ့ အခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို လိုက်ထိန်းချုပ်နေဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေ တစ်ချို့စိတ်ကြီးသူတွေက ဒေါသဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို သူတို့ကြောင့် စိတ်ညစ်မခံပါနဲ့။ ကြင်နာစိတ်သာမွေးထားလိုက်ပါ။
စိတျဆိုးဒေါသဖွဈနသေူတဈယောကျကို ဘယျလိုဆကျဆံမလဲ ???
သငျ့ဖကျက စိတျမဆိုးပမေယျ့ တဈစုံတဈယောကျက အကွီးအကယျြစိတျဆိုး ဒေါသဖွဈနတောကို ကွုံဖူးပါသလား။ ဒီလို စိတျဆိုးနတေဲ့သူဟာ သငျ့ကောငျမလေး၊ သူငယျခငျြး၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျ ဒါမှမဟုတျ အခွားသူစိမျးတဈယောကျယောကျလညျး ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။ ဒီအခွအေနကေ သငျ့ကို နမေထိထိုငျမသာဖွဈစမှောပါ။ ဒါဆိုရငျ သငျ့ကို စိတျဆိုးနတေဲ့သူကို ဒေါသပွပြေောကျပွီး ပုံမှနျအတိုငျး ကောငျးကောငျးမှနျမှနျဖွဈသှားအောငျ ဘယျလိုလုပျနိုငျမလဲ။။
ဒီကိစ်စကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့အတှကျ အဆငျ့လေးခုရှိပါတယျ။ စိတျဆိုးရတဲ့ အကွောငျးရငျးနဲ့ အခွအေနတှေကေ တဈခုနဲ့တဈခု ကှဲပွားနိုငျပမေယျ့ ဒီအဆငျ့တှကေိုတော့ အခွအေနအေမြားစုမှာ အသုံးပွုလို့ရနိုငျပါတယျ။
ပထမဆုံးအခကျြက ခှနျးတုံ့ပွနျ မပွောဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ တဖကျလူက စိတျဆိုးပွီး ဘာပဲပွောပွော၊ ဘာပဲလုပျလုပျ ပွနျမတိုကျခိုကျမိပါစနေဲ့။ ဒီလို ပွနျပွောမယျ၊ ပွနျတိုကျခိုကျမယျဆိုရငျ တဖကျလူကို ပိုပွီးစိတျဆိုးဒေါသဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျဆိုးဒေါသဖွဈနသေူတဈယောကျကို ဘယျတော့မှ ဒေါသနဲ့ မတုံ့ပွနျပါနဲ့။ သငျ့အနနေဲ့ ရှကျစရာကောငျးတယျလို့ ခံစားရရငျတောငျမှ ဒီအခြိနျမှာ မာနကို ခဏတာဘေးခြိတျထားလိုကျပါ။
၂။ ဂရုစိုကျမှုကို ပွပါ။
စိတျဆိုးနသေူကို ပွနျပွီးဒေါသဖွဈနမေယျ့အစား သူတို့ကို ဂရုစိုကျတဲ့အကွောငျး ပျေါလှငျအောငျ ပွသရမှာပါ။ မြားသောအားဖွငျ့ စိတျဆိုးကွသူတှဟော နားလညျမှုလှဲမှားနတောကွောငျ့ ဖွဈတတျပါတယျ။ သူတို့ပွောတာကို သခြောနားထောငျကွညျ့တာက သူတို့ရဲ့ စိတျနသေဘောထားကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျပါတယျ။ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး ပွနျပွောသငျ့တဲ့စကားတှကေတော့ —–
ဘာမြားမှားယှငျးသှားလဲ ပွောပွနိုငျမလားခငျဗြ။ ကြှနျတျောကူညီပေးနိုငျမှာပါ။
အခုလိုဖွဈသှားတဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးပါဘူး။ ကြှနျတျော ဘာမြားလုပျပေးရမလဲခငျဗြ။
ဒီလို ဖွဈရမှာမဟုတျပါဘူး။ အဆငျပွရေဲ့လားခငျဗြ။
စတဲ့ စကားလေးတှေ ပွောလိုကျမယျဆိုရငျ စိတျဆိုးနသေူဆီက စကားတှကွေားရနိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ သူတို့ပွဿာကို နားထောငျပွီး ရှငျးပေးလို့ရနိုငျပါတယျ။
စိတျဆိုးနသေူက သငျ့အပျေါမှာ ဒေါသတှပေုံခနြပွေီဆိုရငျ အခွအေနကေို အကောငျးဆုံးကိုငျတှယျဖို့ အမွနျဆုံးနညျးလမျးကတော့ သငျ့အနနေဲ့ သူတို့ဒေါသဖွဈတာကို ဘယျလိုခံစားရလဲဆိုတာ လုပျပွ၊ ပွောပွလိုကျဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကွောငျ့ ကွောကျသှားတာ၊ စိတျရှုပျသှားတာ၊ စိုးရိမျသှားတာ စသဖွငျ့ ပွောပွလိုကျပါ။ ပွီးတော့ သငျပွောဆိုနတေဲ့အကွောငျးအရာ၊ သငျလုပျဆောငျပေးတာမှာ သူတို့ကို ထိခိုကျနဈနာစတော မရှိဘူးဆိုတာ သိသှားအောငျ လုပျဆောငျပါ။
၄။ စိတျတငျးမာမှုကို လြှော့ခပြေးပါ။
ဒီအခကျြကတော့ နညျးနညျးဂရုစိုကျဖို့လိုပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ တဈခြို့ဇီဇာကွောငျတဲ့ ပုဂ်ဂိုဟျတှကေ စိတျတငျးမာမှုလြော့အောငျ လုပျတာကို တဈမြိုးတဈမညျထငျတတျတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျအခြိနျမှာ လုပျဆောငျသငျ့လဲဆိုတာကို သုံးသပျပွီး ဟာလလေးတှပွေောတာ၊ ပွုံးပွတာ ဒါမှမဟုတျ အခုဖွဈတဲ့ကိစ်စက ဘာမှအရေးမကွီးဘူးဆိုတာကို သိသာအောငျ ရှငျးလငျးပွတာမြိုးတှေ လုပျနိုငျပါတယျ။
ဘယျလိုပဲ နညျးလမျးတှရှေိရှိ၊ သငျ့အနနေဲ့ အခွားလူတဈယောကျရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို လိုကျထိနျးခြုပျနဖေို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဘယျလောကျပဲ ကွိုးစားသညျဖွဈစေ တဈခြို့စိတျကွီးသူတှကေ ဒေါသဖွဈနဦေးမှာပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ တဈနတေ့ာကို သူတို့ကွောငျ့ စိတျညဈမခံပါနဲ့။ ကွငျနာစိတျသာမှေးထားလိုကျပါ။
Previous: အရက်နာကျခြင်းအတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
Next: ရည်းစားဟောင်းက ချစ်သူသစ်ရနေကြောင်း သိလိုက်ရသောအခါ……